७ वर्षे बालकको मुखबाट निकालियो ५२६ वटा दाँत, सर्जरी गर्न लाग्यो ५ घण्टा , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । सामान्यतया मानिसका ३२ वटा दाँत हुन्छन्, तर एक ७ वर्षे बालकको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकालिएको घटना खुलासा भएको छ । भारतको चेन्नईको सविता डेन्टल कलेजमा एक सर्जरी भयो, जसमा एक ७ वर्षे बालकको मुखबाट ५२६ दाँत निकालियो।
यो बच्चा Compound Composite Ondontome रोगबाट पीडित थियो । बुधबार हस्पिटलको ओरल एण्ड म्याक्सिलोफेशियल सर्जरी विभागका प्रोफेसर सेन्थिलनाथनले बच्चाको गिजामा सुजन रहेको बताए । उनको उपचार अस्तालमा भइरहेको थियो। तीन वर्षको उमेरमा बच्चाको गिजामा सुजनको सिकायत आएको थियो । त्यो बेला धेरै समस्या भएको थियो । तर सुजन बढ्दै गयो त्यसपछि उसका अभिभावकले उसलाई अस्पताल ल्याए।
प्रोफेसर सेन्थिलनाथनले बच्चाको तल्लो दाहिने गिजाको एक्स रे र सीटी स्क्यानमा धेरै दाँत देखिएको बताए । त्यसपछि सर्जरी गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । सर्जरीका क्रममा जब उसको गिजा खोलियो, त्यहाँ एक झोला जस्तो चिज देखियो । अप्रेशन गरेर त्यसलाई निकालियो । त्यसको तौल करिब २०० ग्राम थियो । सोही झोला जस्तै चिजबाट ५२६ वटा दाँत बाहिर निकालियो । यो देखेर डाक्टरहरुको टीम हैरानमा परेको थियो ।
उनले यो सर्जरीमा करिब ५ घण्टा लागेको बताए । झोला जस्तो चिज डुंगा जस्तो थियो । सर्जरी भएको तीन दिनमा बच्चा ठिक भएको जनाइएको छ ।